Ka Faa'iidayso Soo Bandhigida Kulliyada Apple | waxaan ka imid mac
Jordi Gimenez | 13/01/2022 14:52 | Kombiyuutarada Mac
Hadda qaar badan oo idinka mid ah horeyba waad u ogeydeen in Apple ay leedahay qayb gaar ah oo dalabyo ah oo loogu talagalay ardayda jaamacadda. Dalabyadan gudahooda waxaan ku ogaanay inay jiraan qiimo dhimis 10% ah oo lagu sameeyay inta badan agabka shirkadu soo saarto iyo qiimo dhimis kale oo xiisa leh.
Dareenkan, waxaa suurtogal ah in qaar badan oo idinka mid ah ay hore u maqasheen tan Apple waxay u fidisay ardayda kulliyadaha, laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in tani ay sidoo kale u adeegto qaraabada ardayda, macalimiinta ama shaqaalaha la xidhiidha.
Waxaa heli kara ardayda dhigata ama dhigata jaamacada, waalidiinta wax u iibsada ardayda jaamacadaha iyo macaliminta ama shaqaalaha kale ee qaybta waxbarashada.. Si aad u bilowdo, hubi inaad buuxisay shuruudaha. Alaabooyinka Apple ee saxda ah, waxaad ku guuleysan kartaa wax kasta oo aad maskaxdaada dejisay. Iyo si laguu caawiyo, Apple waxay bixisaa qiimo gaar ah qaybta waxbarashada
1 Inaad akoon ku yeelato UNIDAYS waa shuruud lagama maarmaan ah
1.1 Qiima dhimista firfircoon ee 10% iibsashada sanadka oo dhan
2 Qiimo dhimis shaqaynaysay sanado
3 Adeegyadu sidoo kale waxay ku dhacaan qiimo dhimistan
4 Sida loogu gato Mac ama iPad qiimo dhimis ardaydu ku leedahay shabakada
5 Sida loogu gato Mac ama iPad qiimo dhimis ardaydu ku leedahay shabakada
Inaad akoon ku yeelato UNIDAYS waa shuruud lagama maarmaan ah
Sida cad, si loo helo qiimo dhimistan, shuruud lagama maarmaan ah ayaa loo baahan yahay, Hayso xisaab UNIDAYS. Si aad tan u samayso waxaad si fudud u leedahay si ay u helaan website-ka Apple halkaas oo ay si toos ah noo qaadataa in abuurista xisaabta this, waxaan wadaagnaa ah isku xirka si aad isu diiwaangeliso UNIDAYS.
Marka tallaabadan la sameeyo waa inaan xisaabta ku darnaa dhinacyo kale oo ay ka mid tahay tirada qalabka aad geli karto waa xadidan tahayIntaa waxaa dheer, waa inaad aqbashaa siyaasadda sirnimada oo aad u oggolaataa UNIDAYS oo keliya, ee ma aha Apple, inay kaydiso, maamusho oo baarto xogta aad bixiso. Haddii aadan rabin in UNiDAYS ay hesho xogtaada, isticmaal xulashooyinka xaqiijinta ee beddelka ah.
Dhanka kale, waxaa muhiim ah in la yiraahdo waxaan sidoo kale ku leenahay qiimo dhimis software-ka Apple iyo rukunnada. Waxaa ka mid ah sida cad Apple Music, Apple TV, Apple One iyo inta kale ee adeegyada ay bixiso Apple maanta.
Qiima dhimista firfircoon ee 10% iibsashada sanadka oo dhan
Isticmaalayaal badan ayaa u maleynaya in dalabyadani ay leeyihiin taariikhda dhicitaanka, laakiin marka la eego iibsashada jaamacadda, ma sameeyaan. Isticmaalayaasha ayaa ku raaxaysan kara kuwan 10% qiimo dhimis mid kasta oo ka mid ah badeecadaha sanadka oo dhan, iyada oo aan lahayn taariikho gaar ah. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u xiiso badan ardayda inay ku iibsadaan badeecad leh mid ka mid ah akoonnadan maadaama si fudud loo diiwaan geliyo waxaan ku raaxaysan karnaa qiimo dhimista alaabta, adeegga iwm.
Iibsashada MacBook cusub, iMac cusub, ama xitaa iPad kasta ama qalab kasta Shirkadda Cupertino way ka raqiisanaan kartaa iyadoo ay ugu wacan tahay diiwaangelinta UNiDAYS. Tani hadda waa firfircoon tahay ee sii wad
Qiimo dhimis shaqaynaysay sanado
Qaar badan oo idinka mid ah, oo ah ruug-cadaaga ugu badan, waa hubaal inaad xasuusataan markii aad si toos ah u sheegtay iibiyaha ama website-ka Apple-ka inaad u muujisay inaad rabto qiimo dhimis arday la'aan. Tan waxaa la samayn karaa dhowr sano ka hor, Looma baahna koonto UNiDAYS ama wax la mid ah looma baahna si looga faa'iidaysto qiimo dhimis 10% ah oo lagu sameeyay alaabta Apple.
Si macquul ah isticmaaleyaal badan oo wax ka ogaa qiimo dhimistan ardayda ayaa ka faa'iideystey. Iyagoo aan arday ahayn ayay waydiisteen qiimo dhimis iyo ugu dambeyntii Apple waxay joojisay inay "sidaas u aamini lahayd" oo waxay dooratay inay isticmaasho xaqiijintan iyada oo loo marayo UNIDAYS in dhab ahaan waxa kaliya ee ay qabato ay tahay hubinta haddii aan runtii ku leenahay xisaab arday oo jaamacad ama dugsi ah.
Adeegyadu sidoo kale waxay ku dhacaan qiimo dhimistan
Dhammaan kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​qiimo dhimista isdiiwaangelinta Apple Music, Apple TV +, Apple Fitness +, Apple One iyo inta kale ee adeegyada ay Apple bixiso si wadajir ah ama si gaar ah, waxay ka faa'iidaysan karaan qiimo dhimista ardayda.
Tusaale ahaan, si aad u hesho qiimo dhimista ku biirista Apple Music, waa inaan raacnaa tillaabooyinkan:
Fur Music-ka ama abka iTunes oo taabo Dhegeysiga ama Adiga
Taabo ama dhagsii dalabka tijaabada ah (qofkii ama qoyskiiba hal)
Dooro Ardayga, ka dibna taabo ama dhagsii "Check Requirements"
Waxaa lagu tilmaami doonaa website-ka UNiDAYS, halkaas oo ay tahay inaad raacdo tilmaamaha shaashadda si aad u xaqiijiso diiwaangelintaada. Marka UNiDAYS ay xaqiijiso inaad tahay arday, waxaa laguu wareejin doonaa App-ka Muusiga ama iTunes
Ku gal aqoonsiga Apple iyo erayga sirta ah ee aad wax ku iibsanayso. Haddii aadan haysan aqoonsiga Apple, dooro "Create Apple ID cusub" oo raac tallaabooyinka. Haddii aadan hubin inaad haysato aqoonsiga Apple, waxaanu kaa caawin karnaa inaad ogaato
Xaqiiji macluumaadkaaga biilasha oo ku dar qaab lacag bixineed sax ah
Taabo ama dhagsii Ku biir
Tani waa waxa si toos ah loogu sameeyo dhammaan adeegyada Apple iyo iibsashada alaabtu waa isku mid. Nidaamku waa mid aad u fudud oo dareen leh, wax dhib ah kuma yeelan doontid, dhammaan waxaad u baahan tahay inaad si toos ah u tagto qaybta gaarka ah ee ardayda si ay u iibsadaan.
Gal UNIDAYS oo ku raaxayso qiimo dhimistan alaabta Apple.
Sida loogu gato Mac ama iPad qiimo dhimis ardaydu ku leedahay shabakada
Sicir-dhimisyadu way kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan badeecada laakiin Mac-yada waxay 10% ka dhimman yihiin qiimihiisa. iPad-ka waxay ka socdaan 6 ilaa 8% iyadoo ku xiran nooca la doortay iyo qalabyada waxay ku dhacaan wax ka badan ama ka yar si la mid ah. Qiimaha MacBookga ugu jaban ee dukaanka ardaydu waa 1016 euro. Qalab heerka gelitaanka ah oo ku daraya Apple's M1 chip, 8 CPUs cores iyo 7 cores GPU. Marka la eego qaabka ugu sarreeya (kaas oo ah midka lagu taliyay) qiimuhu wuxuu ahaanayaa 1.260,15 euro, kani waa horeba midka ku daraya 8 GPU iyo 8-core CPU sidoo kale.
Si aad wax ku iibsato adigoo isticmaalaya UNIDAYS waa inaad raacdaa tillaabooyinkan.
Si toos ah u gal website tufaax waxbarashada oo dhagsii ikhtiyaarka Hubi UNIDAYS
Samee akoonkeena cusub haddii ay dhacdo in aynaan horay u lahayn mid isticmaalaya ciwaanka iimaylka iyo erayga sirta ah
Marka xisaabtaada la sameeyo, waa inaad xaqiijisaa inaad arday tahay adigoo raacaya tillaabooyinka
Waxaa kuu soo baxaya shaashad aad si toos ah uga raadin karto jaamacaddaada ama kulliyadda aad iska diiwaan gelinayso
Markaad hesho, waad iska diiwaan gelin kartaa oo aad geli kartaa dukaanka Apple si aad wax u barato mar labaad adiga oo helaya qiimo dhimista
Dhammaan kuwa haysta dukaanka Apple ee u dhow gurigooda ama u dhowaan kara mid, waxa kale oo suurtogal ah in ay si toos ah u isticmaalaan qiimo dhimista UNIDAYS. Qiima dhimistani gabi ahaanba ma kala duwana haddi aad wax ka iibsato shabkada ama dukaanka jidheed.
Markaad tagto dukaanka waa inaad soo bandhigtaa Dukumeenti si toos ah u caddaynaya inaad tahay arday, macalin ama shaqaale xarun waxbarasho. Bakhaarku waxay hubin doonaan xogta iyo qiimo dhimis la mid ah kuwa aan ka helno qaybta Store Online ee waxbarashada ayaa la bixin doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Ka faa'iidayso wax-soosaarka Apple ee ardayda kulliyadaha
Waxaad hadda soo dejisan kartaa Dropbox beta oo ku habboon Apple's M1